शब्दावली सर्तहरू - Print Peppermint
शब्दकोष: लिंगो र शब्दावली छाप्नुहोस्
लोकप्रिय सर्तहरू र परिभाषाहरू
के हो: घर्षण प्रतिरोध?
कागज बेकार वा काम नलाग्ने बिरोध गर्न सक्ने स्फिंग र निचोल्ने हद
के हो: अवशोषण?
कागज भित्रका सुविधाहरू बुझाउँछ जुन यससँग सम्पर्कमा रहेका फ्लुइडहरू अवशोषित गर्ने क्षमता दिन्छ। उदाहरणमा पानी, पेय ... थप पढ्नुहोस्
के हो: एकॉर्डियन फोल्ड?
तह कागजी को एक विशेष ढाँचा को संदर्भ दिन्छ। नाम कागजको आकारबाट निकालेको छ जब यो खोलिएको छ (एक अर्डरियनको जस्तो)
के हो: एसीटेट प्रूफ?
प्रिन्टि proof प्रमाणलाई बुझाउँछ जुन प्रकृतिमा एसीटेट हो। यो प्रमाण निश्चित गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ कि प्रिन्ट र colorsहरू जुन पूर्वानुमान गरिएको छ… थप पढ्नुहोस्
के हो: एसिड फ्री पेपर?
कागजातहरू जुन एसिडको उपस्थितिबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्। यस प्रकारको कागज प्रकृतिमा सामान्यतया क्षारीय हुन्छन्। यसले यसलाई क्षमता दिनुहुन्छ ... थप पढ्नुहोस्
के हो: एसिडिटी?
एसिडको स्तर वा सीमा जुन कुनै कागजमा वा यसको पदार्थमा फेला पर्दछ जब पीएच स्तरसँग तुलना गरिन्छ। To बाट ... प्राप्त गर्दै थप पढ्नुहोस्
के हो: अन्नको बिरूद्ध?
सही स्थान वा कागजमा फाइबरको स्थान। यो अन्नसँग गुड्न महत्त्वपूर्ण छ, अन्नको बिरूद्धमा होइन। यो आउँछ ... थप पढ्नुहोस्
के हो: एयर-ड्राई पेपर?
कागज जुन तातो हवाको प्रयोगबाट सुख्खा भयो। तातो हावा कागजमा उडाइएको छ केहि टुक्रा पछाडि केही नरहेकोले। थप पढ्नुहोस्
के हो: रक्सी?
तरल पदार्थहरू सन्दर्भ गर्नुहोस् जुन प्रिन्टि press प्रेसले पानीको सतह तनाव कम भएको सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दछ। मदिराको विकल्पहरू ... थप पढ्नुहोस्
के हो: एल्युमिनियम?
धातुबाट बनेको प्रेस प्लेट। यो सामान्यतया अफसेट लिथोग्राफीको साथ व्यवहार गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो प्राय: लामो वा मध्यम रनहरूमा प्रयोग हुन्छ। यी… थप पढ्नुहोस्
के हो: घोषणा कार्डहरू?
यी कागजातको कार्डको साथ जोडा मिलाइएका खामहरूसँग सम्बन्धित छ। तपाईं तिनीहरूलाई सामान्यतया फेला पार्न सक्नुहुनेछ जब त्यहाँ विवाह वा महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू हुन्छन्।
के हो: एन्टिक फिनिश?
कागजहरूको लागि प्रयोग फिनिशलाई जनाउँछ। तपाईं प्राय: यी समाप्तहरू आवरण कागज वा पुस्तकहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यी समाप्त प्राय: एक संग आउनेछ थप पढ्नुहोस्
के हो: एप्रन?
स्थानमा सन्दर्भ गर्दछ जुन एक फोल्डआउटको किनारमा सिर्जना गरिएको हुन्छ (सामान्यतया बाइन्डि inमा प्रयोग गरिन्छ)। तपाईं यसलाई प्राय: फ्रेन्च फोल्डहरूमा फेला पार्नुहुनेछ। तिनीहरूको… थप पढ्नुहोस्
के हो: पुरालेख कागज?
एक कागजलाई दर्साउँछ जुन एसिडमुक्त छ र त्यो विघटनको रूपहरूमा प्रतिरोधी छ। यसको कार्य लामो कागजात कागजातहरू बनाउने हो।
के हो: कृत्रिम चर्मपत्र?
कागज जुन राम्रोसँग गठन गरिएको छैन वा धेरै कमजोर गठन छ
के हो: आर्टवर्क?
यो सामान्यतया प्रत्येक वस्तु वा सामग्रीलाई सन्दर्भित गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन प्रयोग भइरहेको छ, अनुकूलित गरिएको छ वा मुद्रणको प्रक्रियाको लागि तयार छ।
के हो: एसेन्डरहरू?
यी तल्लो केसमा अक्षरहरू हुन्। यसले विशेष रूपमा ती अक्षरहरूको माथि उल्लेख गर्दछ।
के हो: पछाडि सिलिन्डर दबाव?
यसले प्रेसरको सीमालाई जनाउँछ जुन तस्विरलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कुरा निश्चित गर्नका लागि राखिएको हुन्छ… थप पढ्नुहोस्
के हो: ब्याकबोन?
यो मेरुदण्डको रूपमा लोकप्रिय छ। यो केवल एक बाउन्ड पुस्तक को पछाडि दर्शाउँछ।
के हो: ब्याक अप गर्दै?
कागजको उल्टो छेउमा मुद्रण भइरहेको प्रक्रियामा सन्दर्भ गर्दछ जहाँ यो पहिले नै प्रिन्ट भइसकेको अवस्थामा पनि… थप पढ्नुहोस्
के हो: Bagasse?
फाइबर वा उखुलाई दर्साउँछ जुन कुचिएको छ। यसको कार्य प्राय: कागजको उत्पादनसँग सम्बन्धित छ।
के हो: ब्यागी रोल?
यो मिल रोलमा एक दोष हो जुन वेबको आधारमा तौल वा क्यालिपरमा परिवर्तनको कारण हुन्छ। यसको नतीजा ... थप पढ्नुहोस्
के हो: ब्यान्ड?
यो तीन तरिकामा परिभाषित छ; यसले स्ट्र्यापलाई सन्दर्भित गर्न सक्छ जुन धातुको हो। यी पट्टिहरू सामग्री वा कार्टन भित्र राखिन्छ कि… थप पढ्नुहोस्
के हो: बेरियम सल्फेट?
यो एक पदार्थ हो जुन गोरोको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो प्रतिबिम्बित विसारकको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन १००% हुन्छ।